Gaadiidka Adana ayaa kusii socda Gawaarida Buuxda | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean01 AdanaGaadiidka Gaadiidka Gaadiidka Gawaarida Gaaray
Gaadiidka Gaadiidka Gaadiidka Gawaarida Gaaray
13 / 06 / 2018 01 Adana, GUUD, WADADA, TURKEY
Alparslan Turkes qasnaa taariikhda nuurka cas Boulevard, ciriiriga dhammaadkeedu kulankooda Museum ah, Aegean Bağatar ku dhameysatay kaalinta koowaad ee Boulevard ah, Kozan 8 gacmo furay adeegyada Isgoyska smart, bilood 5 dhawaan 137 xaaraya wadada kiiloomitir qariyeen.
marathon Service qaadaan gaadiidka magaalada ee mudnaanta la siiyo jasiiradda mashaariicda sırtlayan Duqa Metropolitan Huseyin Oral, qosol wajiga of saaxiibkiis gaadiidka magaalooyinka la si weyn u gargaartay in guuro. City ku dhawaad ​​in jasiiradda in badasha site a Rafaa dhismaha degmada Metropolitan ayaa la siiyaa 6 Kiiloomitir Alparslan Turkes socodka go gaadiidka Boulevard ah, Aegean Bağatar Boulevard ayaa keenay waji cusub, jeestay Kyrenia Bridges Museum isgoyska entry 3 wadada haadka, gacmo Kozan 8 Isgoyska smart oo la furay . 4 sano 2 kun 450 kilomitir oo ah waddooyinka, buundooyinka 102 iyo buundooyinka, kun 403 kiiloomitir network biyo la cabi karo, badbaadinta kiiloomitir 560 of line biyaha wasakhda iyo duufaanka madaxweynaha magaalada afka ah, ee 2018 bilaha 5 koowaad ee cusboonaysiinta jidka 137 Kiiloomitir dalka kiciyey heerarka gaadiidka.
ALPARSLAN WAX KA BEDDAY TARJUMIDA KA JOOGTAY TALKEŞ
Hogaaminta mustaqbalka ee Adana iyo mashaariicda Mega-ga, ayuu qoray wargayska President-ga ayaa socodsiin ku sameeyay taraafikada gaadiidka ee Alparslan Turkesh Boulevard, kaas oo gaadiidka u fidiyay dhinaca jidka waqooyi-koonfur ee magaalada. Adeeggani wuxuu ka mid yahay afhayeenka madaxwaynaha, kaas oo sugayay sugida nalka cas ee labadaba oo ku yaalla kiiloomitir 6, wuxuu noqday maalin fasax oo loogu talagalay saaxiibadiisa.
MUSIC MUSIC IN MOSLESENCE MUSUUM
D-400, oo ah tallaabada labaad ee muhiimka ah ee lagu yareeynayo taraafikada mashruuca ballaarinta ee Kyrenia Bridge, oo madaxwaynaha madaxweynaha soo saaray, Matxafku wuxuu soo afjaray isgaadhsiinta si degdeg ah. Kooxaha degmooyinka waxay bedeleen waddada 6-mitir u dhexeeya Kiriimka Giriiniya iyo Xarunta Jarmalka ee 11.5 wadada xaddiga 3. Diyaargarowga marxaladaha lacag la'aanta ah ee loo maro Fuzuli Street, darawalladu waxay soo qaadeen taahid gargaar.
Heerka Koowaad ee EGE BAGATUR OK
Madaxweynaha Oral, xarumaha degmada Seyhan fidisa helitaanka mashaariicda maalgashiga dadweynaha oo baaxad weyn oo ku Bağatar Aegean ka Boulevard ayaa dhameystirtay marxaladda koowaad ee dayactirka. Mithat Özsan Boulevard iyo Mustafa Kemal Boulevard, taas oo si toos ah ku xidha Courthouse cusub iyo Hospital Numune on siiyo helitaanka Bağatar Aegean ka, meelaha cagaaran qasan tahay muuqaalka, ciyaaraha carruurta, goobaha madadaalada iyo waxqabadka, jiideen jidka baaskiil iyo tamashle orodka dareenka. Degmada Metropolitan, the line koonfurta Aegean Bağatur hoos wajigii labaad ee baadhitaanka Mithat Özsan Boulevard
si ay ugu xirmaan isgoysyada isgoysyada.
KOZAN RECOVERY RECOVERY GIFT 8 WAXAA LAGA HELAY KARA
Madaxweynaha Oral, baabuurta iyo dadka lugta ah ee magaalada Kozan ka mashaariicda uu fuliyo si ay u gargaarto Isgoyska gaadiidka ee furitaanka Kozan in guuradii xnumx'inc degmada ee xoreynta ka shaqo cadowga ogaaday. gacmo Isgoyska Smart 98, wadada 8-haadka, barkadaha ornamental iyo xeerarka madadaalada shaaca ka qaaday by isgoyska Rafaa, waxaa madaxa loo saaraa taaj taallo ee Ataturk. Madaxweynaha Oral, 'Square Ataturk' ayuu siiyey square square loo yaqaan.
5 DEG DEG AH 137 MILESTONES BISHE
4 2 Kunaan, buundooyinka 450 iyo xawaaladaha, 102, isku-xirka biyaha, 403 tuubooyinka fogaha iyo biyaha roobabka magaalada. Magaalooyinka waaweyn ee magaalooyinka, wadarta dhererka 560 2018 5 kilomitir 137 kun tan oo daboolay kulaylka. Isla muddadaas, waddada 42, oo gaadiidka u siisa tuulada 47, ayaa dib loo cusboonaysiiyay daboolka xeebta. 69 kun tan oo ah asfalt kulul ayaa loo isticmaalay inta lagu gudajiro xadadka 23 inta lagu jiro dayactirka weyn ee 61.
Hawlgalka Asfalt ee Mamak
Shaqada dayactirka waddooyinka ee magaalada Malkaraato ayaa sii socota
Qalabka tareenka ee shirkadda Sentepe-Yenimahalle ayaa weli ku socda xawaare dhan
Shaqada Cusub ee Gebze Tababarka Cusub ayaa sii socota
Degmada Erzincan ayaa sii socota
Ordu Peripheral Road Wadada gaasta
Dhismaha wabiga ee dib u soo kabashada dalxiiska beeraha ee Denizli ayaa sii waday xadhig buuxa
Mashruuca wadada weyn ee Istanbul-Bursa-Izmir
Diyaargarow shaqo ee asphalt ee gawaarida buuxda
Tababarka Machinist ee dhererka buuxa